Fotoam-bita : Laharam-pahamehana ho an’ny fanjakana ny famoronana asa -
AccueilRaharaham-pirenenaFotoam-bita : Laharam-pahamehana ho an’ny fanjakana ny famoronana asa
Ny sehatry ny asa indray no noresahin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mandritra ity fotoam-bita faha-18 ity, nambarany tamin’izany ary fa “efa an-taonany maro tokoa no sahirana eo amin’ny lafin’ny asa ny malagasy rehetra nandritra izay fitantanana nifanesy izay, ary maro noho izany ireo olona izay tsy manana asa fivelomana indrindra ny tanora . Ireo manana asa indray dia mitaintain-dava amin’ny mety fiverimberenan’ny krizy politika ka andravana indray izay efa misy”. Anisan’ny notanisain’ny Filoha moa ny mikasika ny olana izay sedraina eo amin’ izay lafin’ny asa izay rehefa misy ny hetsika politika ka nitarika ny fikatonana orinasa maro “tsaroantsika ny fikatonan’ny orinasa maro afaka haba tamin’ny taona 2009 indrindra ireo nanondrana entana tany amerika tamin’ny alalan’ny AGOA, ary teo ihany koa ireo orinasam-panjakana izay nisintahan’ny fanjakana ka tsy voaray intsony tamin’ izany. Vokatr’izany dia lasa taikatra maro no napetrak’izany satria lasa an’aliny, an’hetsiny mihitsy ireo very asa noho izany. Manampy azy ireo ny mpitady asa isan-taona tonga eo amin’ny tsenan’ny asa” hoy ny filoha mitanisa ny olana nifandimby ka nahatonga ny fahaverezan-kasa nifanesy teto amin’ny firenena. Manoloana ireo olana rehetra ireo dia misy ny tarehimarika izay tsara ho fantatra, izay notanisain’ny filoham-pirenena” tanora malagasy efatra hetsy hatramin’ny dimy hetsy no mitady asa isan-taona raha ny tarehimarika navoakan’ny BIT, na ny birao iraisam-pirenena momban’ny asa isan-taona , ary efa ny fitopolo isan-jaton’ ireo tanora ireo no efa any amin’ny sehatry ny asa tsy manara-penitra . Izany hoe tsy misy afa-tsy ny dimy amby enimpolo isan-jato no mahazo asa mitombina, izany aza efa an-taonany maro vao tonga amin’izany. Ampahany betsaka amin’ny vehivavy no sahirana amin’ny fitadiavan’asa, ka mandeha mikiry andeha ho any ivelany na dia misy aza ny fandraharahana . Raha ny fanisana farany no jerena dia an’hetsiny maro ireo raim-pianakaviana izay tokony hiasa nefa tsy mahita ka voatery manao asa an-tselika” raha ny fanazavana izay noentin’ny Filoham-pirenena hatrany manoloana ity olana eo amin’ny sehatry ny asa ity .
Noho ireo voalaza rehetra ireo dia nilaza ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery fa “mitambatra nandritra ny taona maro ny olana sy ny fahasahiranana eo amin’ny tsenan’ny asa, ary politika matotra voalanjalanja maharitra no tsy maintsy hamahana azy. Ekeko fa mila vokatra maika avy amin’ny fanjakana ny famahana olana, ary adidin’ny mpitondra hatrany mihitsy ny mitady ny vahaolana rehetra . Izany no anton’ny hiantsoako hatrany ny isian’ny fitoniana satria tsy hisy ampiasany ny volany hamorona asa eo amin’ny firenena misavorovoro’’. Na izany aza nefa dia nisy ny ezaka natao hoy ny Filoha, na dia mbola tsy lavorary aza “sahiko ny milaza fa mihamaro ny tolotr’asa, na dia ekeko aza mba mbola tsy ahavaha ny olan’ny tsy an’asa anatin’ny fotoana fohy izany. Mitohy ny ezaka fandrisihana ny sehatra tsy miankina, na ny eto an-toerana, na ny mpampiasa vola avy any ivelany hamorona asa araka izay tratra. Ny sehatry ny asam-panjakana anefa no tena mavitrika ka nitarika ny famoronana asa izao, raha tsy hilaza afa-tsy ireo efatra alina mpampianatra nampidirina ho mpiasam-panjakana ao koa ireo amin’ny sampandraharaham-panjakana maro, tafika, zandary , polisy , douane, impôt ,fahasalamana sns …..ary eo ny fanatanterahana fotodrafitrasa lehibe ataon’ny fanjakana izay miteraka asa daholo . Tsy ireo ihany anefa hoy ny Filoha fa misy ihany koa ny sehatra hafa ‘’ tsy azo hohadinoina ny sehatry ny fambolena izay rehefa nohatsaraina dia miteraka fitombon’ny asa rehefa nohatsaraina ny famatsiana rano , masomboly sy ny sns …… eo ihany koa ny sehatra toa ny jono, ny fiompiana samihafa toa ny tantely, trondro.
Ankoatra ireo ihany koa dia misy ny asa izay voaforona amin’ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany “ekena fa na dia mitsikera ny fitantanana aza ny mpamatsy vola sasany dia nahatsapa ny solontenan’ny banky iraisam-pirenena Coralie Gevers tamin’ ity taona ity , fa tao anatin’ny roa taona dia tsapa ny ezaka nataon’ny mpitondra malagasy teo amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana ahafahana mamorona asa mba hitomboan’ny arin-karena . Azo porofoina izany, azontsika hamarinina ao amin’ny EDBM Economique development board de Madagascar fa tsy nitsahatra nitombo ny isan’ny orinasa nijoro. 923 tamin’ny taona 2011 izay tafakatra 1106 kosa ny taona 2015. 297 ny isan’ny orinasa nijoro nandritra ny telo volana voalohany ity taona ity, azo lazaina fa mahavelombolo satria orinasa Malagasy ny ankamaroan’ izy ireo’’. Hoy hatrany ny Filoham-pirenena. Na dia maro tokoa aza ireo mpampiasa vola izay te hampiasa izany eto dia betsaka ny matahotra ny olana ara-politika” ny angovo izay eo ampahamahana izay tanteraka izany izao isika , mety tsy ampy ny angovo mety lafo izany raha oharina amin’ny firenena hafa. Nefa orinasa vahiny no manome asa eo amin’ny 48 isan-jaton’ izy ireo amin’ izao fotoana izao’’.
Na eo aza ireo fanazavana maro samihafa ireo, dia namehy izany tamin’ny teny fohy ny Filoham-pirenena » tsy matroka akory ny tabilao, ary misy sady betsaka ny fanantenana tanjona dia asa mendrika sy mahavelona, tsara ihany koa ny manamarika fa ao ireo asa izay misy saingy any amin’ny sehatra tsy manara-dalàna mba ialan’ izy ireo amin’ny tsy fandoavan-ketra isan-karazany. Miady isika ny ampidirana azy ireny eo amin’ny sehatry ny matihanina sy ara-dalàna ‘’. Tsy hohadinon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny ezaka vitan’ ireo tanora eo amin’ny famoronana asa ‘’ ampirisihako sy deraiko ireo tanora izay mikaroka, ary mamorona ny asa ho an’ny tenany sy ho an’ny mpiray tanindrazana ihany koa, hiezaka araka izay tratra hanampy anareo, araka izay efa am-pelatanan’ny fanjakana. Betsaka ny asa izay voaforoana eo amin’ny sehatry ny teknolojia, na ny TIC, na ny fananganana fotodrafitrasa ihany koa ‘’. Noho izany dia manantena ireo sehatra tsy miankina ny Filoham-pirenena mba hifanome tanana amin’ny fitondram-panjakana, na dia eo aza ny olana, raha misy ny vola ampiasaina dia orinasa ahafahana mahazo asa no tokony hajoro hoy ny Filoha fa tsy asa mamoafady sy fanadiovam-bola akory . Asa mendrika sy mahavelona no tanjona ho an’ny isam-batan’olona hoy ny Filoha mba tsy hisy intsony ny hirenireny , na hanao asa ratsy, na atao fitaovana politika fotsiny .